निर्मलाका आमा बाबुको प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न हामीले न्याय पाउछौ कि पाउदैनौ ? ,, – Ranga Darpan
निर्मलाका आमा बाबुको प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न हामीले न्याय पाउछौ कि पाउदैनौ ? ,,
असोज१ , काठमाडौं – १३ वर्षीय बालिका बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका आमाबुबाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर छोरीको हत्यारालाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । अधिकारकर्मीहरुसहित निर्मलाका आमा दुर्गादेवी र बुबा यज्ञराज बालुवाटार पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओली लाई भेटेर आफु हरुले न्याय पाउने कि नपाउने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन् । निर्मलाकी आमाले भनिन आफु हरुले कंचनपुरमा न्याय नपाए पछि काठमान्डौ आयको तर अहिले सम्म कुनै पनि नयाय पाउने वा नपाउने भन्ने बारेमा जानकारी नभयको पनि बताईन ।
नेकपा नेताको अपमानजनक व्यवहार :
लगतै अधिकारकर्मीहरुले बोले । उनीहरुले प्रधानमन्त्री स्वयंलाई गलत रिपोर्टिङ भएको बताएका थिए । तर, बाजुराका पूर्वसांसद एवं नेकपाका नेता कर्ण थापाले प्रधानमन्त्रीकै अगाडि अपमानजनक व्यवहार गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
‘तपाईंहरु बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ’ भन्दै हामीलाई अपमान गर्नुभयो,’ अधिकारकर्मी भारती चौधरीले भनिन् ।
ढाकछोप गर्न खोजेको छैनः प्रधानमन्त्री ओली ,
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, निर्मला हाम्री पनि छोरी हुन् । घटनामा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्न टोली खटाएको भन्दै छिटै अपराधीलाई पत्ता लगायर कारबाही गर्ने र आफूले घटनालाई ढाकछोप गर्न नखोजेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।